SIDA LOO DHIGO TOONTA JIILAALKA ILAA GUGA GURI DABAQ AH? - WIXII MARTIDA
Toon Qaboobaha - dalagga niyadda ah marka la eego kaydinta, gaar ahaan guriga.
Maxay siyaabaha guriyeynta ay u maareeyaan si ay u sii wataan kahor sanadka cusub?
Sida loo diyaariyo nalalka toonka kaydinta muddada dheer, iyo shuruudaha looga baahan yahay toonta jiilaalka si ay u noqoto mid cusub oo aan qalalanayn?
Su'aalahan iyo su'aalaha kale ayaa laga jawaabi doonaa maqaalkeena.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo kaydiyo toonta guriga iyo sida loo xafido Maqsinka ama qaybta hoose ee boggayaga internetka.
Sidee loo badbaadiyaa toonta jiilaal ilaa guga? Siyaabaha lagu kaydiyo toonta jiilaalka guriga:
Qabow Habka kaydinta (qaboojiyaha, weelka la soo dhejiyey, daboolka si adag u xiran, ama bacda maro, lagu daaweeyo xal milix).
Tartamidda madaxa toonta jiilaalka cusbo.
Burbursan diirka basasha.
Hooyooyinka qaarkood waxay isticmaalaan inay kaydiyaan dalagyadooda jiilaalka. ballaariyey vermiculitemadaxyo toon qashin ah.
Ku dar sabuubyo toon ah saliidda cuntada.
Kalluumeysiga Waxyaalaha paraffin wax - Hab kale oo loo diyaariyo madaxda madaxa toon ee xilliga qaboobaha ee kaydinta muddada dheer. Nalalka paraffin-ku xiran looma lumiyo qoyaan waxayna joogaan waqti dheer.
Kaydinta kartoonka sanduuqyada, shabakadaha dhexdooda, xarriiqyada cirkaoo la mid ah qaansada.
Sida loo ilaaliyo toonta toonta saliidda, waxaad ka baran doontaa fiidiyowga:
Kaydinta wakhtiga dheer ee toonta ayaa sidoo kale loo saari karaa qadar yar si loo dhigo barafeeyaha qaboobaha xilliga jiilaalka oo lagu qalajiyo adigoo isticmaalaya hawo cusub ama qalabka guriga.
Sidee loo diyaariyaa toonta jiilaalka mudo dheer?
Si aad u ilaaliso toonta jiilaalka wakhti dheer, waa in aan la korin meelo qoyan oo waa in si xad dhaaf ah loo soo bandhigo kelyaha. bacriminta nitrogen. Ka hor inta aysan kuulin toonta ha cabin muddo saddex toddobaad ah.
Mature, ma waxyeelo (farsamo ahaan ama cayayaanka) nalalka waxaa loo qaadaa kaydinta: waxay haystaan ​​tayada ilaalinta wanaagsan. Mid kastaa waa inuu leeyahay ugu yaraan 3 qolfaha cufandaboolaya basasha oo dhan.
Nalalka qajaar la qalajiyey gudaha 28 maalmood gudahood, diiray miisaanka sare ee wasakhaysan iyo goynta (haddii kaydinta dalagga aan laga fileynin digriiga) dhererka dhererka 5 cm oo madax ka ah, iyo xididada - tago 1 sentimitir. Roots, haddii loo baahdo, sidoo kale waa la riixi karaa ama gubi karayaa gaaska gaasta, oo keliya ayaa hoos u dhiga.
Talooyin loogu talagalay goosashada qaboobaha xilliga qaboobaha iyo isku diyaarinta kaydinta fiidiyowgaan:
Sida loo xafidayo toonta jiilaalka aqalka? Si aad u ilaaliso toonka jiilaalka wakhti dheer, waxaa lagula talinayaa in la hirgeliyo madaxyadooda la kariyey ilaa 2 saacadood. saliidda cuntada oo leh dhibco yar iodiin (0.5 litir oo saliid ah - 10 dhibcood oo iodine), ka dibna qalaji dalagga dibedda.
Halkee ku kaydi toonta jiilaalka guriga? Toonta xilliga qaboobaha waxaa badanaa lagu kaydiyaa daboolkagudaha jikada ama gudaha qaboojiyaha. Waa in la wada baabbi'iyo marka hore oo dhan: ka duwan sida toon guga, waa ka yar tahay ku habboon kaydinta mudada dheer.
Sidee loo dhigaa toonta jiilaalka guriga dhexdiisa - xabadkee? Ku darsantay cusbo, bur, ama caleemaha miro la gooyey, toonta jiilaalka ayaa lagu kaydin karaa dhalooyinka ama digsiyada.
Salt (bur, vermiculite) ayaa ku shubay hoosta, ka dibna lakabka Toonta ayaa la dhigaa.
Lakabadu waxay u baahan yihiin inay beddelaan, halka dhererka weelka u oggol yahay. Lakabka ugu dambeeyay ee toonta waa inuu ahaado Lakabka 2 cm. Habkani wuxuu ku salaysan yahay bedelka cusbada dhowr jeer xiliga jiilaalka, maxaa yeelay waqtiga ayaa noqda qoyan.
Garlic oo aan lahayn xumbo iyo qurxiyaan derbiyada jikada. Sida basasha, tuulooyinka, toonta jiilaalka ayaa lagu kaydiyaa naclon pantyhose.
Gaariga gaarka ah khudaarta, waxay ku haboon yihiin in lagu keydiyo toon, laakiin iyaga iyo sidoo kale iyaga iyo sidoo kale qoryaha iyo naqshadaynta, haddii xeerarka kaydinta aan la raacin, toonta jiilaalka si dhakhso ah ayuu u daaqaa.
Toon jiilaalka lagu kaydiyaa yar yar boorsada canabka ah. Oo sidaas daraaddeed isagu ma lumiyo qoyaanka, ku shub oo diirka basasha.
Sidee loo keydiyaa toonta qaboobaha xilliga jiilaalka? Habka kaydinta ee toonta xilliga qaboobaha guriga ee bacaha canjaha ee fiidiyowgaan:
Sidee loo dhigayaa toonta jiilaalka ee guriga muddo ka dheer? Heerkulka: +2 - 3 degrees Celsius (marka lagu kaydiyo qaboojiyaha); +15 - +20 darajo Celsius (kaydinta hudheelka ama jikada). Qoyaan: laga bilaabo 70 ilaa 80 boqolkiiba.
Laguma talinayo in la dhigo toonta jiilaalka meel u dhow qalabka korontada: waxay si dhakhso ah u lumisaa qoyaan, ilkaha waxay noqdaan kuwo qalalan.
Natiijada tijaabooyinka ku saabsan kaydinta toonta dabaqa ah lix bilood oo xaalado kala duwan ah ee fiidiyowgaan:
Toonta jiilaalka way adag tahay in la sii wado illaa guga guriga. Nolosheeda shafka ah ee guriga waa caadi ahaan 4 - 5 bilood.
Waxaan ka wada hadalnay sida, meesha iyo meesha lagu keydiyo toonta jiilaalka guriga.
Waxaa jira siyaabo badan, laakiin hadafka dhammaan hababka kaydinta waa in laga hortago qalajinta goosashada.
Waxaa si guul leh loo kaydiyaa oo keliya cayayaanka, cayayaan iyo farsamoyaqaanka dhaawacmay, kuwaas oo si haboon u koray, laga saaray waqtigii iyo si taxadar leh loogu diyaariyey kaydinta.